तौल घट्दै घटेन ? यसो गरे कसो होला ? – Online National Network
तौल घट्दै घटेन ? यसो गरे कसो होला ?
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:१४
कुनैबेला भनिन्थ्यो, मोटोघाटो हुनुपर्छ । खाइलाग्दो हुनुपर्छ । अहिले जमाना स्लिमको छ । ग्याजेट्स मात्र होइन, ज्यान पनि स्लिम नै खोजिन्छ । किन त ?
किनभने अहिले मोटोपनले ‘खानदानी’को होइन, रोगको संकेत गर्छ । मोटोपनको अहिले थुपै्र साइड इफेक्ट देखिएको छ ।
पहिलो, यसले ज्यानलाई भद्दा देखाउँछ । ज्यान फुर्तिलो, छरितो र चुस्त हुँदैन ।
दोस्रो, अहिलेको जमानामा व्यक्तित्वको खास महत्व छ । यस्तो अवस्थामा भद्दा शरीर आफैमा व्यक्तित्वको बाधक हो । यस्तो शरीरमा न लुगा सुहाउँछ ? न समग्र शरीरको बान्की मिल्छ ।
तेस्रो, मोटो शरीर हुनु भनेको शरीरमा अतिरिक्त बोसोको भण्डार हुनु हो । यसले रक्तनलीहरुलाई थप साँघुरो बनाउँछ । मुटु, कलेजो, मृगौलाको कार्य-संचालनमा अवरोध पुर्‍याउँछ । यसले अनेक किसिमको रोग निम्त्याउँछ । जस्तो कि, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलोस्टोर आदि ।
कतिलाई थाहा नहुन सक्छ । किनभने मोटोपन घटाउने चक्करमा रहेकाहरुले आफ्नो खानामा कटौती गरिरहेका हुन्छन् । खाना नखाएपछि मोटो भइदैन । एक हिसाबले कुरा ठिक हो । तर, शरीरलाई विभिन्न किसिमको पोषण तत्व आवश्यक हुन्छ । ति पोषक तत्वको स्रोत भनेकै खानेकुरा हुन् । यदि खानेकुरा नै नखाने हो भने शरीरमा पोषण पुग्दैन । त्यसले अर्को रोग निम्त्याउँछ ।
अहिलेको आम समस्या भनेको गलत खानपान र निस्त्रिmय दिनचर्या हो । विभिन्न किसिमको प्रशोधित खानेकुरा सेवन गर्ने, शारीरिक श्रम नगर्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै मोटोपनको कारण बनिरहेको छ ।